HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 29-AUG-2020
Saturday August 29, 2020 - 10:31:27 in Wararka by Mogadishu Times
Golaha Wasiirada oo ansixiyay habraaca hubka Ciidanka Xoogga dalka G/wasiirrada DF xil gaarsiinta dalka, ayaa Khamiistii kulan ay ku yeesheen Muqdisho wa xay ku meel mariyeen hab-raaca hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidanka xoogga dalka So
Golaha Wasiirada oo ansixiyay habraaca hubka Ciidanka Xoogga dalka G/wasiirrada DF xil gaarsiinta dalka, ayaa Khamiistii kulan ay ku yeesheen Muqdisho wa xay ku meel mariyeen hab-raaca hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay gola ha u soo gudbisay wasaar adda difaaca dalka. Hoggaanka Hubka iyo Rasaasta Ciidanka Xoog ga Dalka, ayaa qeyb ka ah hoggaannada muh iimka u ah shaqooyinka CXD, waxaana Habra aca Dorraad la ansixiyay oo qeyb ka ah qor shaha dib-u-habeynta ciidanka uu sare u qa adayaa hufnaanta iyo horumarinta awoodda ci idanka si ay ugu guuleystaan dadaallada xor eynta guud ahaan dalka iyo nabad dhisidda si mawaadiniinta Somaliyeed ay u helaan amni buuxa. Sii hayaha R/Wasaaraha dalka, Md. Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa guddoomiyay shirka golaha oo sidoo kale looga hadlay amniga dal ka, xaaladda COVID-19 iyo dayn cafinta.
Duqa Muqdisho oo sheegay in weli ay jirto khatarta COVID-19
G/G/Banaadir ahna duqa M/Muqdisho Cumar M.Maxamed ( Finish) ayaa sheegay in weli Ma amulka G/Banaadir uu wado qorshaha uu uga hortagayo Cudurka Coronavirus oo kiisas ka mid ah laga helay dalka.
Waxaa uu sheegay in Maa mulka uu bilaabayo qorshaha wacyigelinta iyo ka hortagga COVID-19, isla markaana weli uu yahay qatar ka jirta dalka ayna mas’uuliyiinta maamulka G/Banaadir do orweyn ka qaadan doonaan ka hortagga cud urka. Hadalka Guddoomiye Cumar Finish ay aa waxaa uu ku soo aadayaa xilli todobaadya dii la soo dhaafay uu hoos u dhacayay kiisaska cudurka Coronavirus ee Soomaaliya, isla mark aana dowladda Soomaaliya ay qaaday xayira adii ka dhashay cudurka.
Qoor Qoor, Waare iyo Lafta Gareen oo jawa ab kasoo saaray go’aaanadii kasoo baxay Deni iyo A/Madoobe
Madaxweynayaasha D/G/edyada Hir-shab elle,Galmudug, iyo K/Galbeed ayaa war-saxaa fadeed wadajir ah ka soo saaray shirkii M/Gar owe ugu soo gaba-gaboobay madaxweynayaa sha Puntland Iyo Jubbaland.
War-saxaafadeedkan ayey 3 madaxweyne ku taageereen shirkii Garowe ka dhacay ee u dhaxeeyey Saciid Deni iyo Axmed Madoobe, waxayna qoraalkooda ku soo koobeen shan qodob oo kala ah.
1 –Madaxweynayaashu waxay soo dhaweyn ayaan shirkii wadatashiga ee Puntland iyo Jub baland ee ka dhacay Garowe 25-kii illaa 26-kii bishan, waxayna bogaadinayaan inay 2da D/Golaadeen inay taladooda ku soo biiriyaan habsami u socodkii iyo go’aanadii shirkii Dhu usamareeb-3.
2 –Madaxdu waxay soo dhaweynayaan shir ay yeeshaan DF& 2da D/Goboleed ee Puntland &Jubbaland, si loo dhameeyo wixii is faham darro ah ee jira, si loo ambaqaado u diyaar-gar ow doorasho ku dhacda waqtigeeda. 3– Hir-shabelle, Galmudug, iyo K/Galbeed waxay di yaar u yihiin inay ku biiritaan fekradah ooda iyo dadaalkooda juhdi kasta oo lagu gaa rayo is faham taam ah iyo xal u helidda caq abadaha taagan.
4-Madaxdu waxay uga mahad celinayaan dha maan umadda Soomaaliyeed taageerada iyo dhiiragelinta ay la garab taaganyihiin madaxdo oda, si xal waara loogu helo arrimaha taagan.
5– Madaxdu waxay uga mahad celinayaan xu bnaha beesha caalamka ka taageeridda umad da Soomaaliyeed ee dhinacyada amniga, arr imaha bulshada iyo horumarka.
Aweys oo Maraykanka ugu baaqay in uu ra ali-gelin iyo magdhow deg deg ah ka bixiyo hogaamiye uu ka dilay Al-shabaab
Wadaadka lagu magacaabo Xasan Daahir Aweys, oo u xiran DFS, ayaa si adag uga hadl ay dilka hoggaamiye ka tirsan Al-shabaab , oo ku dhintay duqayn ka dhacday K/ta Soo ma aliya. Sheekh C/dir Cismaan Yaroow (Kumaa ndoos), oo kamid ahaa Hoggaamiyaasha Sare ee Al-shabaab, ayaa maalmo ka hor lagu dilay weerar ay fuliyeen Diyaaradaha aan Duuliyaha lahayn ee Maraykanka, kaas oo ka dhacay G/ Sh/Hoose. Muuqaal laga soo duu bay Xasan Daahir Aweys, oo lagu faafiyay Warbaahinta Al-shabaab, ayuu si kulul ugu cambaareeyay dilka C/dir Kumaandoos, oo uu ku tilmaamay mujaahid ku shahiiday gacan ka xaq-daran oo gaalo.
Sh.Aweys, wuxuu Maraykanka ka dalbaday in uu raalli-gelin iyo magdhow deg deg ah ka bix iyo dilka Kumaandoos. Sidoo kale, wuxu wac ad ku maray in dhakhso loogu aar-gudi doono Hoggaamiye Kumaandoos, islamarkaana jawa abta laga bixiyo ay noqon doonto mid laga sheekeeyo Qarniyada soo socda.
Heshiiskii Dhuusamaree 3 ‘oo la baabi’iyey’
Madaxweynayaasha maamullada Jubbal and iyo Puntland oo Dorraad soo geba-gebeey ey shira ay ku ahaayeen M/Garoowe ee xar un ta G/Nugaal ayaa isku raacay inay shir uga qe yb-galaan M/Muqdisho.Axmed Madoobe & Saciid Deni ayaa caasimada dalka uga qeyb-gali doona shir wada-tashi oo ay sheegen inuu yahay "mid xal siyaasadeed loogu helayo xaal ka cakiran ee ka dhashay qabsoomida doora shooyinka dalka.”.
Shirkan ka dhacaya Muqdisho ayaa u muuq da mid wax walba oo horey loogu heshiiyey shi rkii Dhuusamareeb 3 meesha ka saaraya, isla markaana hadda iyo kow la isugu imanayo wa da-hadallo cusub.
Inkasta oo Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ay sheegeen inay dabacsanaan badan ka muu jiyeen mowqifkoodii adkaa ee ay kaga soo hor jeedeen shirkii Dhuusamareeb-3, ayaa haddana waxaa taas burinaya inaysan shirka as iyo natiijadiisa aqbalin oo ay dalbadeen shir cusub.
Intii ay socdeen kulamadaasi waxay wada-hadal dhanka teleefanka la yeesheen madax da DFS ee hormuudka u yahay Farmaajo iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyagoona isla ga rtay in xal mideysan laga gaaro xaaladda dal ka, gaar ahaan arrimaha dorashoyinka dalka.
"Madaxweynayaasha ayaa sidoo kale, intii ay socdeen shirarka Garoowe waxay xiriir dha nka telefoonka la yeesheen Madaxda DFS & dowladaha xubnaha ka ah, taasi oo ay ka dha latay in shir wada-tashi ah layskugu yimaado caasimada Soomaaliya ee Muqdisho,” ayaa lagu yiri
Villa Somaliya ma xaqiijin wa da-hadalkan taleefon, balse ha ddii uu jiro, waxay macnaheedu tahay in mad axtooyada dhankeedana aqbashay shirka cus ub.Madax Goboleedyada K/Galbeed, Galmud ug iyo HirShabeelle ayaa qoraal ay Habeen ho re soo saareen kuna soo dhoweeyey shirka Garoowe iyo baaqa shir cusub, taasi oo mac naheedu yahay inay aqbaleen shirka Muqdi sho oo meesha ka saaray shirkii Dhuusam areeb 3.
Shirka Muqdisho ayaa waxa isku hor-fadhii san doona labada madaxweyne, madax gobo leedyada kale iyo Farmaajo oo markii hore is ku seegay shirweynihii wada-tashi ee dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, isla markaana is-faham siyaasadeed lagu gaari karo.
Inkasta oo ay suurta-gal tahay in qodobada qaar ee ku jiray heshiiskii Dhuusamareeb 3 dib loo qaato, ayaa haddana dib u furitsa heshiis kaas iyo wada-hadallada cusub waxay ka dhi gan yihiin in heshiiskaas aan waxba ka jirin, oo hadda iyo gorgorton cusub uu billaaba nayo.
Wabiga Shabeelle ayaa saacadahii la soo dhaafay fatahaahado hor leh ka sameeyay qe ybo kamid Magaalada Beledweyne ee Xarunta G/Hiiraan, iyada oo saameyn weyn uu ku ye eshay dalagyada Beeraha.
Dadka ku nool Magaalada Beledweyne ay aa waxaa ay sheegeen in dalagyo dhowr ah oo ku yaalla Beeraha Beledweyne, isla marka ana uu baabi’iyey,sidoo kale uu Wabiga ku fat ahay Xaafado ka tirsan M/Beledweyne.
Duqa M/Beledweyne Nadar Tabaax Maalin ayaa bilaawday dadaalada lagu xakameeyna yo fatahaahada Wabiga Shabeelle M/baladw eyne meelo kooban oo ay Shalayy biyaha ka soo baxeen ee hareeraha Wabiga si markale uusan Wabiga u fatahin.
Booliiska Mareykanka oo gacanta ku dhig ay nin ay raadinayeen 12 sano
Nin darawal taksi ahaa oo looga shakisanaa inuu dilay 2 gabdhood oo uu dhalay ayaa la xiray ka dib markii muddo 12 sano ah lagu raadjoogay. Warqad da lagu soo xirayo Yaser Cabdel ayaa la soo saaray maalin uun ka dib markii sanaddii 2008-dii la toogtay gabdhihiisa oo lagu kala magacaabi jiray, Sarah Yaser Saciid, oo 17 sano jir ahayd, iyo Amina Yaser Saciid, oo 18 jir ahayd.
Ninkani oo u dhashay dalka Masar ayaa waxaa sanaddii 2014 lagu daray liiska 10 qof ee ay aadka u baadigoobayso laanta dambi barista Mareykanka ee FBI. Muddo 7 sano ah oo laga joogo markii war qada xiritaanka la soo saaray ayaa waxay booliiska ku xireen isaga iyo 2 ka mdi ah eheladiisa,G/ Texas.
Mr Saciid, oo ay imika da’diisu tahay 63 jir, ayaa waxaa lagu wadaa in dhawaan loo wareejiyo de gmada Dallas. Xigasho:BBC SOMALI
Axmed Madoobe oo u digay DF Soomaaliya
Madaxweynaha DG/Jubaland, Axmed Ma xamed Islaam, ayaa ka digay qalalaase siyaas adeed oo ka dhacay Soomaaliya, haddii DFS ay doorasha da waqtigeeda ku qaban wayso. Axmed Madoobe oo warbaahinta la hadlay kadib shirkii Garoowe ugu soo dhammaaday Puntl and iyo Jubaland, ayaa ka digay in muranka iyo is-qab-qabsigu sii socdo, taasi oo sida uu sheegay xasilooni-darro iyo qal-qal amni geli naysa xaaladda waddanka.
"Waa in laga shaqeeyaa sidii doorasho ay ku dhici lahayd, waqtigeedana ugu dhici lahe yd, qal-qal siyaasadeedna uusan u iman, sab abtoo ah marka aad waqtiga dib u eegto, isbe ddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacaa wuxuu Soomaaliya u gaystay tallaabooyin ho rey loo qaaday, wax kasta oo markaa caqabad ku keena ayada ayuu dhibaato ku yahay,” ay uu yiri Axmed Madoobe.
Madaxweynaha Jubaland, ayaa sidoo kale sheegay in marxaladda kala guurka ah ee dal ku haatan marayo, ay tahay mid u baahan dul qaad iyo isu-tanaasul dheeri ah, si looga he shiiyo hannaanka doorashada 2020/2021.
Axmed Madoobe, ayaa sidoo kale sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ayaga isku dan yihi in, islamarkaana aysan wax dan ah ugu jirin in meel kale wax looga soo guuriyo.
Madaxweynaha Jublanad ayaa sheegay in ay dhankooda diyaar u yihiin inay waxyaabo badan ay danta dalka dartiis uga tanaasuleen, ayna doonayaan kaliya xalka Soomaalida.
Dowlada Turkiga oo Gaadiidka Dagaal ugu deeqday Dowlada Soomaaliya
Wasaaradda Gaashaandhigga DFS &Talis ka Ciidanka Xoogga dalka ayaa si rasmi ah ula Wareegay Gaadiidka Gaashaaman oo Dawlad da Turkiga ay ugu deeqday Soomaaliya.
Munaasabad kooban oo la gu qabtay Dekadda Muqdi sho ayaa waxaa goob-joog ka ahaa Sii hayaha Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga XFS Md.Xasan Cali Maxamed Amar-dambe , Tali yaha Ciidanka Xoogga dalka S/guuto Odawaa yuusuf Raage iyo Safiirka Dawladda Turkiga ee Soomaaliya.
Gaadiidkaan Gaashaaman oo casri ah ay aa wax badan u tari doona Ciidanka Xoogga dalka oo wada howlgallo dalka looga xoreyna yo argagixisada Alshabaab. DFS ayaa wada dadaalo xooggan oo lagu dhisayo Ciidanka Xo ogga qeybihiisa kala duwan, Waxaana arrima haas barbar socda qalabeynta & tayeynta Ciid amada.
Turkiga ayaa Soomaaliya ka caawiya dhin acyo dhowr ah oo ay ugu horreyso dhismaha ciidamada, Waxaana saldhig weyn uu ku leey ahay magaaladda Muqdisho, kaasi oo lagu ta babaro CQS Soomaaliya.
Kalfadhigga 2aad ee Baarlamaanka Galmud ug oo si rasmi ah u furmay
Kalfadhigga 2aad ee baarlamaanka Galmu dug ayaa si rasmi ah Habeen hore ugaga fur may M/Dhuusamareeb, Xafladda oo ka dhacd ay xarunta Shiirkole, waxaa ka qeyb galay Ma daxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qoor-qo or G/Aqalka sare Cabdi Xaashi, G/Baarlamaanka Maxamed Nuur Gacal, Xildhi baano, Wasiiro, Bulsha rayidka, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale. GB/D/goboleedka Galmudug Xildhibaan Maxamed Nuur Gacal oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in howlo badan ay horyaallaan lana doonayo in lagu ansixiyo inta lagu guda jiro Kalfadhiga labaad ee Hab een hore u furmay.
Gacal ayaa tilmaamay in 25-Hindise sharciy eed in Golaha Wakiilada uu horyaallo, meela ha ay ka yimaadeen ay yihiin Wasaaradaha Maamulkaas oo mid waliba u gudbisay hal hindise sharciyeed si cod baarla maan loogu helo. "Wasaarad waliba waxa ay soo gudbisay hal hindise sharciyeed oo ay baa rlamaanka ka dooneyso in uu u ansixiyo, dab can waa howlaha ugu muhiimsan ee nalaga do onayo meelmarinta kalfadhiga labaad inta aan ku guda jirno” ayuu yiri Afhayeenka G/ Wakiila da Galmudug.
Senator Cabdi Xaashi C/hi G/G/Aqalka sare BFS oo ka qaybgalay munaasabadda furitaan ka kalfadhiga 2aad ee Baarlamaanka 2aad DG/Galmudug. Guddoomiye Cabdi Xaashi ay aa sheegay in 3 arrimood ay ku guuleysteen Hay’adaha, madaxda iyo shacabka Galmudug, lagu diiwaangeliyay taariikhda oo baal dahab ah ka geli doonaan.
Ugu dambeyntii waxaa munaasabada ka ha dlay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qoor-qoor isagoo soo bandhigay waxyaabaha waaweyn ee u qabsoomay muddada uu dhis an yahay maamulkaas.
Qoor-Qoor ayaa kusoo koobay 7 qodob oo qaybo hoosaadyo kale leh, isaga oo sheegay in maamulkiisa uu qorsheynayo hiigsiga himi looyinka fog si wax looga qabto waxyaabo kale oo horyaalla sida suu hadalka u dhigay.
"Waxaa inoo Furmay Kalfadhiga 2-aad Ee Barlamanka 2ad DG/Galmudug muddadii ga abteen ee la dhisay Galmudug-ta cusub waxaa la qabtay shaqooyin aad u muhiimsan, maamu lka waxa uu gaaray guullo waaweyn oo aan ku soo koobay todobadaan qodob” ayuu yiri Mad axweynaha Galmudug.
Madaxweyne Qoor-Qoor waxa uu Baarlam aanka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan Mad axda iyo laanta fulinta oo wajahaya howlo ba dan oo horusocod u baahan si door muuqda ay uga qaataan howlaha dalka.
Wasiir Fiqi oo dalab u diray Baarlama anka Galmudug
Wasiirka W/Amniga D/G/Galmudug Axmed Macalin fiqi ayaa Baarlamaanka Galmudug u gu baaqay inay meel mariyaan sharciyo muhiim ah oo uu ugu ho reeyo sharciga la dagaalanka wa xa loogu yeero argagaxisada.
Waxaa uu sheegay in sharcig aan uu muhiim u yahay inay Galm udug kasoo kabato dagaal beeleedyadii ka dhacay iyo weerarada ay marraka qaar dega annada Maamulkaas ka geystaan Ururka Al-Shabaab.
”Waxaan heynaa sharcigii lagu dhisi lahaa hay’adaha Amniga iyo kan la dagaalanka Ar gagaxisada oo sahli kara in Al-Shabaab laga saaro degaannada ay Galmudug ka heystaan iyo in wax laga qabto kuwa lacagaha ku taage era ayuu yiri” Wasiir Fiqi.
Guddoomiye Cumar Finish oo eedeyn kulul u jeediyay dowlad Goboleedyada
Guddoomiyaha G/Banaadir ahna duqa M/Muqdisho Md.Cumar Maxamuud Maxamed ( Finish) ayaa ka hadlay shirkii uu uga qeyb gal ay M/Dhuu samareeb ee Caasimadda Galmud ug& go’aanadii kasoo baxay. Waxaa uu sheeg ay in Madaxda Sare ee DFS& Maamulka G/Ba naadir uu qorshahoodu ahaa in dalka ka dhac do doorasho qof iyo Cod ah, hayeeshee go’aa nadaas ay kasoo horjeesteen Madaxda Maa mul goboleedyada shirka ku sugnaa ee Galm udug, Hir-Shabeelle iyo K/Galbeed.
Guddoomiye Cumar Filisha ayaa qiray in muddo badan laga wada hadlayay sidii Mada xda D/G/yad looga dhaadhicin lahaa inay ogo laadaan inay dalka ka dhacdo dooaso qof iyo cod ah, hayeeshee ugu dambeyn ay iyagu ta naasuleen oo ay go’aankoda la qaateen Maa mul Goboleedyada.
Shirkii Madaxweyne farmaajo iyo Madaxda DG/yada uga qabsoomay Dhuusamareeb ay aa waxaa kasoo baxay in la qabto doorasho dadbadan, iyada oo qodobada qaar ay shirka asi ka soo baxay ay kasoo horjeesteen Maamu lada Puntland & Jubbaland.
Wariye Serjito oo xabsiga laga sii daayay
Wariye Maxamed Deeq Cabdiraxiin (Serjito) ayaa fiidnimadii Habeen hore laga sii daayay Saldhiga Dhexe ee M/Baydhabo, ka dib markii lagu xiray Arbacadii. Xariga Wari yaha ayaa ka dambeeyay markii uu wareysi ka qaaday dad dhalii lay shaqada Wasaaradda Hawe enka, Xuquuqul Insaanka & Arrimaha Qoyska ee Koonfur Galbeed.
Yuusuf C/dir Maxamed, Agaasimaha Guud ee W/Haweenka K/Galbeed ayaa askar ka tirs an Booliska Baydhabo u adeegsaday xariga Wariyaha. Wariye Serjito ayaa xarigiisa ka dib hadlay, waxaana uu yiri "Xabsiga waan ka soo baxay, hadana xor ayaan ahay. Ma jirto wax dhibaato ah oo xabsiga la’igu gaystay, marka laga soo taggo in xorriyadda la’iga qaaday.”
Serjito ayaa intaa ku daray "Kuwii i soo xir ay ayaa xabsiga iigu yimid, iyagaana iga soo sii daayay. Waxay ceebsadeen wadadii ay u mareen xarigeyga, sidaas ayayna xabsiga iiga soo sii daayeen.”
Dhanka kale waxaa soo baxaya warar she egaya in Madaxtooyada K/Galbeed ay ku amar tay Agaasimaha W/Haweenka in si deg deg ah i uu xabsiga uga soo sii daayo ninka Wariyaha.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Xafiiska Mad axweynaha K/Galbeed, Cabdicasiis Xasan Ma xamed (Lafta-gareen) uu Agaasimaha ku cann aantay falkaasi.
Ururka Saxafiyiinta K/Galbeed ayaa cambia reeyay tallaabada lagu xiray Wariye Serjito, iya goona Madaxtooyada K/Galbeed ugu baaqay inay wax ka qabato sharci-darrada lagu xiray Maxamed Deeq Serjito.
Serjito ayaa ka mid ah Saxafiyiinta, sida we yn looga yaqaano M/Baydhabo, waxaana uu ka hawlgalaa Telefishinka RTN, oo ka mid ah telefishinada madaxabannaan ee dalka ka shaqeeya.
HirShabeele waxaa lagu badbaadi karaa "oo kaliya”: Guda-Joog & Dibad-Joog midaysan, tala midaysan iyo gurmad mideysan!
Bulsha walba degaanka ay ka soo jeedo wa xaa looga baahanyahay inay u istaagto, huru markiisana u midowdo. Hadii aan bulshada de gaankaas ka soo jeedaa ku bar aarugsaneyn una mideysnayn horumarinta degaankooda, nati ijada la hubo in ay ku dhamaan doonto, waa tan hadda ka muuqata Hir Shabe ele ee ku saleysan kala daadsanaan, aragti la’ aan iyo wax qabad la’aan.
HirShabeele, waxaa helay maamul aan xil Iska saarin horumarkeeda, una soo jeedin oo ti isa uun ku milmay. Mana helin bulsho soo je eda, oo indha furan, una abaabulan in ay mad axda iyo maamulka HirShabeele ku kormeera an wax qabadkooda, kulana xisaabtamaan, ku abaal mariyaan cidii wax qabaneysa, ku dhalii laan cidii aan wax qabaneyn, ugu dambeynta na iska ceyriyaan cidii loo caal waayo.
Haddaba, si looga gudbo habacsanaanta iyo maamul xumada ku habsatay HirShabeele, waa in bulshada HirShabeele, gudaha iyo diba dduba isu abaabulaan wax ka bedelka xaalad da dayacan ee HirShabeele. Waxa aan ugu ba aqaynaa dhammaan waxgaradka iyo bulsha weynta HirShabeele ka soo jeeda iyo inta kale ee HirShabeele jecel, in ay isu abaabulaan u na midoobaan gurmadka iyo badbaadada Hir Shabeele, si ay u yeeshaan cod midaysan oo xoogan oo wax ka bedeli kara habaca iyo day aca ku habsaday HirShabeele.
Bulshada ka soo jeeda HirShabeele ee dib ad joogta ahi waa in ay sameestaan golayaal ay ku midaysanyihiin, si ay xooggooda iyo xool ohooda u mideeyaan, cod xoogana u yeesh aan. Goolka iyo yoolka loo socdaana waa in la helaa maamul leh: aqoon, aragti fog, karti, u heelanaan, daacadnimo, hal-zbuur iyo fulin firfi rcoon. Gurmadka HirShabeele ha guuleesto!
xasan xundubey jimcaale
Golaha Ammaanka oo soo saaray qaraar ku saabsan Soomaaliya fariiina u diray DF iyo dowlad goboleedyada
Golaha Ammaanka QM ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey qaraarka 2540 (2020), kaasi oo muddo sanad ah ku kurdhiyey muddo xileedka xafiiska QM ee Soomaaliya ee UNSOM, kaasi oo lagu aas-aasay qaraarkii 2158 (2014).
Isla qaraarkan ayaa Golaha A mmaanka waxa uu ku sheegay inuu soo dhow eynayo kulamadii dhowaanahan dhex-maray ey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowldaha xubnaha ka ah, waxaana uu adke eyey inay muhiim tahay wada-shaqeyn buuxda oo dhex marta.
"Wuxuu [golaha] xusayaa mas’uuliyadda dhammaan dhinacyadan ka saaraan horumar inta wada-shaqeyntooda iyo wada-hadalladii ay DF hoggaamineysay ee Dhuusamareeb, wu xuuna hoosta ka xariiqayaa muhiimadda wad a-shaqeynta iyo heshiis laga gaaro arrimaha muhiimka u ah qaranka,” ayaa lagu yiri qoraal ka."Arrimahaas waxaa ka mid ah fulinta Qor shaha Amniga Qaranka, heshiis ka gaarista ni daamka cadaaladda federaalka, qeybsiga awoodaha iyo kheyraadka, dib u eegista dast uurka, iyo qorsheynta iyo qabashada doora shooyinka qaranka.”
Golaha Ammaanka ayaa mar kale ku celi yey inay muhiim tahay siyaasad loo dhan yah ay iyo doorashooyin dimoqraadi ah oo Sooma aliya laga qabto, si ay taasi u xaqiijiso amniga iyo xasilloonida muddada fog ee Soomaaliya.
"DF ah ayaa leh mas’uuliyadda 1aad ee ah ka dhabeynta waxyaabaha ay Soomaaliya hiig saneyso, ayada oo si dhow ula shaqeyneysa DG/yada,” ayaa lagu yiri qaraarka.
Golaha Ammaanka ayaa ugu dambeyn she egay inuu dib u eegis joogto ah ku hayn doono xaaladda Soomaaliya, islamarkaana uu isbedd el ku sameyn karo qaar ka mid ah qodobada ku jira qaraarkan iyo qaraaradii hore, haddii loo baahdo.
Dad banaanbax dhigayay oo lagu xir xiray Guriceel
Wararka laga helayo D/Guriceel ee G/Galg aduud ayaa waxaa ay sheegayan in Ciidama da Ammaanka degmadaasi ay Shalay xir xireen qaar kamid ah Ganacsatada degmadaasi oo banaanbax dhigayay. Ganacsa tada ayaa kasoo horjeestay in ay u guuraan Suusq Cusub oo lagu iibiyo xoolaha uu maamulka Galmudug ka furay magaalada Guriceel, iyaga oo sheegay in arrintaasi ay sababo amni uga baqayaan.
Ciidamada Ammaanka D/Guriceel ayaa ka al eryay dadka banaanbaxa dhigayay, waxaa na Ganacsatada qaarkood ay Risaala u shee geen in Ciidamada ay xireen ku dhawaad 30 kamid ah b